Maxay ka dhigan tahay in Qadar ay ka qeybgasho shirka Sacuudiga? - BBC News Somali
31 Maajo 2019
"Mareykanka ma rabo Khaliijka, Islaamka iyo Carabta oo qeybsan inuu la dagaallamo Iiraan." Waa sida ay qabaan dadka siyaasadda ka faalooda.
Kullanka uu Sacuudiga qabanqaabiyay waxaa la filayaa in looga hadlo khilaafka adag ee Mareykanka iyo Iiraan soo kala dhexgalay iyo Xuutiyiinta Yaman oo dhowr goor diyaarado duuliye la'aan ah ku weeraray Sacuudiga.
Donald Trump, madaxweynaha Mareykanka, ayaa dhowaanahan cadaadis ku hayay dowladda Iiraan.
Bare sare Xasan Sheekh oo bare culuumta siyaasadda ka ah jaamacad ku taalla Muqdisho ayaa yiri: "Waxaa dhici karta inuu xiriir la leeyahay arrintan ah isu qalab tumashada Mareykanka iyo Iraan."
Dhawaan ayay ahayd markii Markab ganacsi lagu weeraray meel u dhow Imaaraatka Carabta. Sidoo kale xuutiyiinta ayaa weeraray xarumaha shidaalka ee Sucuudigu leeyahay.
Dawladda Imaaraadka ayaa xilligaas sheegtay in afar ka mid ah doonyaheeda ay waxyeello soo gaartay xilli ay marayeen meel u dhow biyaha Imaaradda Fujayrah.
Sacuudiga ayaa asna caddeeyey in laba doomood oo ay leedahay, ay kamid ahaayeen doonyaha waxyeelladu soo gaartay.
Illaa iyo hadda lama oga in Xuutiyiinta, oo dagaal kula jira isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiya ee ku sugan Yemen, ay ka dambeeyeen weerraradaas ka dhacay biyaha Imaaraadka.
"Shiishad jeceylka carabta iyo sida uu u maalgelinayo argagixisada Soomaaliya"
Imaaraadku wax faahfaahin ah kama bixin nooca uu ahaa weerarka iyo waliba cidda ka dambaysay.
Maalmo uun kadib weerarkaas ayaa xarumo shidaal oo Sacuudigu leeyahay qaraxyo lala beegsaday, Xuutiyiinta ayaana dhowr jeer oo hore weerar ku qaaday diyaarado aan duuliye lahayn oo gantaallo ku ganay, waxay sidoo kale weerar ku qaadeen diyaarado marayey hawada Imaaraadka Carabta.
Ka qeybgalka Qadar
"Waxaa jirikarta arrin ah in gacmo kale ay ku jiraan diyaarinta kullankan, gaar ahaan Mareykanka oo Qadarna ay iyaga keeneen shirka, Sucuudigana martigelinta la siiyay oo Mareykanka uu u diyaar garoobaayo Iiraan", ayuu yiri Prof Xasan Sheekh.
Wuxuu intaa ku daray "Mareykanka ma rabo Khaliijka, Islaamka iyo Carabta oo qeybsan inuu la dagaallamo Iiraan."
Khilaaf adag ayaa u dhexeeya qaar ka mid ah dalalka Khaliijka iyo Qadar kaas oo sababay in maamulka Dooxa la saaro cuna qabatayn.
Iiraan waa khadka keliya ee diyaaradaha iyo maraakiibta ee u furan Qadar, waxaana suuragal ah in aysan taageerin tallaabo kasta oo ka dhan ah Iiraan, sida uu qabo Xasan Sheekh oo arrimaha siyaasadda ka faallooda.
"Qadar waxaa soo diray Mareykanka. Marabo inaan ka dhigo sida in ay dad kale u shaqeynayaan Laakiin gacmo farabadan baa meesha ku jiro oo ah in xoog aan loo jeedin uu ka dambeeyo," ayuu yiri.
Dowladda Iiraan ayaa lagu eedeynayaa in ay haysato hub nukliyer ah iyo in ay taageereyso Xuutiyiinta Yaman oo dagaal kula jira dowladda dalkaas ee taageerada ka heleysa dalalka Khaliijka.
Markii uu soo baxay khilaafka ka dhexeeya dalalka Khaliijka, dowladda Soomaaliya waxay ka mid ahayd dalalkii la weydiistay in ay taageerto cuna qabateyn la saaray dalka Qadar.
Balse dowladda federaalka ee Soomaaliya oo saaxiib dhow la ah Qadar ayaa qaadatay go'aan dhexdhexaad ah kaas oo siyaasad ahaa saameeyay arrimaha gudaha ee Soomaaliya.
Hadda, Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qeybgalaya shirka ka socda Sucuudiga.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Axmed Ciisa Cawad oo shirka ka qeybgalayo ayaa BBC Somali u sheegay: "Sida caadada ah waxaan dalalka Islaamka la wadaageynaa xaaladda Soomaaliya iyo horumarrada iyo caqabadaha jira, iyo inaan codkeena ku darsano sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyiinka dalalka Islaamka".
Balse, bare sare Xasan Sheekh ayaa aaminsan in "Soomaaliya aysan cod wayn ku lahayn ururka iyo kulankaba. Warsaxaafadeedkii la soo saari lahaana ay go'aan ka gaarayaan Sucuudiga iyo dalal kale oo yar".
"Afar waddan ayaa xoog lahaan jirtay. Sucuudiga, Ciraaq, Suuriya iyo Masar. Suuriya iyo Ciraaq waala burburiyay. Waddamadan kale sida Yaman, Soomaaliya, DJabuuti, Sudan iyo Muritaaniya iyo dalalkale doorkooda ma ahan mid wayn gaar ahaan arrimaha Carabta iyo waxa Bariga Dhexe ka socda".
Maqal Falanqayn: Shirka dalalka Khaliijka
6 Disembar 2016
Boqorka Sacuudiga oo ku baaqay labo shirwayne oo deg deg ah